China Automatic Door Kits, Automatic Sliding Door Opener, Automatic Sliding Door Operator Manufacturer
Tsanangudzo:Automatic Door Kits,Automatic Sliding Door Opener,Automatic Sliding Door Operator,High Performance Automatic Door Kits,,
Home > Products > Door Accessories > Automatic Door Kits
Zvigadzirwa zve Automatic Door Kits , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Automatic Door Kits , Automatic Sliding Door Opener vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Automatic Sliding Door Operator R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
High Performance Automatic Sliding Door Opener Operator  Bata Ikozvino
Kupa Mazano: 1000 sets per month
High Performance Automatic Sliding Door Opener tsanangudzo yakajeka ndeyotevera: Muenzaniso: DC-150 Masango mashizha: jasi rimwe chete (s), mashizha maviri (d) Kurema kweshizha remukova: s≤1 * 160kg, d≤2 * 230kg Kurema kweshizha remukova (mm): s:...
China Automatic Door Kits Vatengi
Miti yedu yemagetsi kitsinyo inosanganisira 1 motori + gear reducer, 1 bhandi, 7 mamiro, 1 pulley isina kubatsira, Microprocessor, 4 masero emotokari yebhuruu, 2 masitadhi ezasi, 2pcs remote control, 2 anogadzika girt clamp kuvhara mabhazi, 1 magetsi harness uye cable-connectors, 2 locator, Aluminium track iyo yakareba 2.08 mamita, mamita matatu, kana mamita mana.
Isu tiri mugadziri wevashandi vekuvhara magedhi anogadzirwa kuti agone kupa vanhu nyore. Automatic Door Systems` motokari yekupa iyo yero yebasa ndeimwe yezvikonzero zvinoita kuti mikova inowedzera yakawanda inowanzozivikanwa. Zvatinoita zvishoma nezvishoma kushandura magonhi emagetsi zviriko mazuva ano, kuponesa nzvimbo uye kunakidza.
Kushongedza masuo emasuo ane maitiro makuru ezvimwewo zvinosanganisira: maitiro ega-oga uye yakazara kuzarura upamhi uye / kana kuderedzwa kuzarura upamhi, uye kubva kunze kwekutonga kwemugwagwa. Kuvhurwa kwemasuo okugadzirira kunogonawo kugadziriswa kuita kuti upamhi huve hudiki kana kuti hukuru. Zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza zvakadai sekuchengetedzwa kwemagetsi zvinodzivirira musuo kuti urege kuvhara kana vanhu kana zvinhu zviri munzvimbo yekucherechedza. Kana masuo emasuo akadzivirirwa paanovhara, anobva avhurwa zvakare kana kana masuo emasuo akadzivirirwa paanovhura, anobva atomiswa nekuchengetedzwa kwekuzvidzivirira kushandura.
Yedu inonyanya kufanirwa kushandura mhepo inowanika. Funga pamusoro peizvi sekuenda-kusuo kwezuva rimwe nerimwe zvinodiwa. Zvose zvinowanikwa zvakazara uye zvisati zvaungana pafekitari nekutsanya, kusina matambudziko-pasina.
Zvikumbiro: Kutengesa, utano hwehutano, ndege, kugamuchira vaeni, makamuri akanaka. Shenzhen Hongfa Automatic Door Co, Ltd yakarongedzwa gonhi rakagadzirwa, kuedzwa uye kugadziriswa kusangana nemamiriro ako ezvinhu. shandura zvipfeko masuo emabhizimisi, zvekutengesa, zvehutano, uye zvekutengesa. Iwe uchawana chekuvhara magonhi edu munzvimbo dzose dzakasiyana-siyana, kusanganisira: Zvipatara, Airports, Retail centrals, Pharmacies, Hotels, Zvokudya zvekugadzira, Zvigadzirwa zvepasitirwo, Zvimwe zvekutengesa zvigadzirwa, uye nezvimwe.
Automatic Sliding Doors inogona kunge iri musuo mumwe chete unofambisa mune imwe nzira kana bi-parting mikova umo mashizha emasuo ose emasuwo mune zvakasiyana. Zvinowanzoshandiswa munzvimbo dzezvokudya, masuo kune zvivako zvekutengesa, zvipatara nezvimwe zvinoshanda apo iwe unoda kupa vatengi vako maoko akasununguka, akachengeteka uye nyore nyore kuwana chivako chako.Kuwedzerwa, chimwe chezvakakosha zvikuru zvekuvhara magonhi isimba rekuchengetedza . Sezvo masuo aya achizarura kana mumwe munhu achipinda kana kuti kunze kwechivako chako, zvinodzivirira kurasikirwa kwesimba apo musuo ungasara wakasununguka kwenguva yakareba.
Simba rekugadzirisa rekuvhara gonhi rinowedzera rinoshanda uye rinowedzera kushanda, rinongoshanda operation / holding-open / closed / half-open to meet customer needs. Simba rekuvhara gonhi remukova rine multiple interfaces kuitira kukwanisa kugadzirisa zvirongwa zvekuchengetedza hupenyu hwako nepfuma zvakachengeteka. Zvakadai se: kuchengetedzwa kwemagetsi evhavhakiti, magetsi emagetsi, sensor, etc. Zvigadzirwa zvemotokari zvinoshandisa teknolojia yekuEurope yekubatanidza motokari nejasi bhokisi, iyo inopa kutyaira kwakasimba uye kushanda kwechokwadi uye kuwedzerwa simba rinobuda, inogona kuenderana nemusuwo mukuru.
Kupa simba, runako, uye teknolojia yose mune imwe purafura, Hongfa's line yekutsvaga mashizha ekutsvaga inopa inopinda mhinduro yezvinyorwa chero zvese. Chinhu chimwe chete chinonzi Hongfa's sound-dampening track inoderedza runyararo rwekushanda kune kunong'un'una chete uye kunomira kusunungura kunzwika kunogona kuendeswa kune zvivako zvekuvaka.
Automatic Door Kits Automatic Sliding Door Opener Automatic Sliding Door Operator High Performance Automatic Door Kits Automatic Door